लगानी Archives - Page4of 195 - Chanakya Post
काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट धमाधम सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् । यसैैक्रममा, हालसम्म गत वर्षको नाफाबाट ५ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । लाभांश घोषणा गर्नेहरुमा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, डिप्रोक्स लघुवित्त, साधना लघुवित्त र स्वरोजगार लघुवित्त रहेका छन् । हालसम्म लाभांश गरेका […]
सिनर्जी पावरले ५० प्रतिशत हकप्रद ल्याउने, विक्री प्रबन्धक नियुक्त
काठमाडौं । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसैक्रममा, सिनर्जीले सानिमा क्यापिटललाई हकप्रद सेयर विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ४० करोड ३२ लाख ८७ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको […]
साधना लघुवित्तको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले गत आवको वितरण योग्य मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३२ प्रतिशत नगद गरी कुल २६.३२ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश […]
तेह्रथुम पावरको आइपीओ बाँडफाँट, यहाँबाट सजिलै हेनुहोस् नतिजा
काठमाडौं । तेह्रथुम पावर कम्पनीको प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीको आइपीओ विक्री प्रबन्धक एनआएबीएल एस क्यापिटलमा आज विहान बाँडफाँट भएको हो । क्यापिटल अनुसार गोलाप्रथाबाट भाग्यमानी ७४ हजार ४०० जनाले १० कित्ताका दरले सेयर हात पारेका छन् भने २२ लाख ७२ हजार २२७ जनाको हात रित्तो भएको छ । […]
‘नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड ३’को इकाई विक्री खुला, कति भर्ने ?
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्टले आजदेखि ‘नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड ३’ को इकाई विक्रीमा ल्याएको छ । फण्डले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ दरलो १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्रीमा ल्याएको हो । विक्रीमा ल्याएको कुल १० करोड इकाईमध्ये बिज पूँजीबापत १ करोड ५० लाख इकाई नबिल बैंक र नबिल इन्भेष्टमेन्टलाई छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये […]
५२ देशबाट भित्रियो २ खर्ब विदेशी लगानी, कुन देशबाट कति ?
काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) भित्रिने क्रम वर्षेनी बढ्दै गएको छ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी रुपमा सहजता बनाएपछि लगानी आउने क्रम बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७६/७७’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो आवको तुलनामा वैदेशिक लगानी ८.५ प्रतिशतले वृद्धि […]
सेयर बजारमा झिनो गिरावट, यी ६ कम्पनीका लगानीकर्ता भने मालामाल
काठमाडौं । सेयर बजारमा झिनो गिरावट आएको छ । यससाता तीव्र उतरचढाव देखिएको बजार आज भने स्थिर देखिएको हो । यससाता आइतबार १०८ अंकले घटेको बजार सोमबार एकैदिन १६२ अंकले बढेको थियो । मंगलबार ४४ अंकले घटेको बजार बुधबार ६० अंकले घटेको थियो । यससाता नेप्से समग्रमा ५० अंकले घटेको छ । सेयर […]
थामिएन सेयर बजारको पहिरो, यी हुन् धेरै मूल्य घट्ने ५ कम्पनी
काठमाडौं । सेयर बजारमा पहिरो जाने क्रम जारी छ । यससाता आइतबार १०८ अंकले घटेको बजार सोमबार १६२ अंकले कमब्याक गरे पनि त्यसयता फेरि ओरालो लागेको हो । पछिल्ला दुई दिनमै नेप्से १०५ अंकले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा कडाइ गरेपछि शुरु भएको नेप्सेको ओरालो यात्रा अझै जारी रहेको […]